Nehele Mesh - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
Izinto Ifanele nehele ekhiqizwa kusuka carbon lensimbi, aluminium, insimbi engagqwali, futhi Alloys ekhethekile inikeza ephephile, ukusebenza, imikhiqizo eliqinile zonke izindawo. Izinzuzo, lokusebenza oluthile futhi izici nehele Mesh: Steel nehele inikeza izinzuzo ezilandelayo kuqhathaniswa ngensimbi igridi amashidi: Steel nehele has isisindo ukukhanya, amandla okuhle, esithwele obunamandla futhi ungagcina izinto futhi izindleko. It unikeza komoya okuhle yokukhanya nomoya, umuzwa yesimanje, tebuciko ...
Fob Inani: US $ 10 - 200 / Piece
Min.Order Ubuningi: 5 Ton / Amathani
Supply Ikhono: 400 Ton / Amathani Isonto ngalinye
nehele ekhiqizwa kusuka carbon lensimbi, aluminium, insimbi engagqwali, futhi Alloys ekhethekile inikeza ephephile, ukusebenza, imikhiqizo eliqinile zonke izindawo.
Izinzuzo, lokusebenza oluthile futhi izici nehele Mesh:
Steel nehele inikeza izinzuzo ezilandelayo kuqhathaniswa ngensimbi igridi amashidi:
Steel nehele has isisindo ukukhanya, amandla okuhle, esithwele obunamandla futhi ungagcina izinto futhi izindleko. It unikeza komoya okuhle yokukhanya nomoya, umuzwa yesimanje, ukubukeka yobuhle nokuphepha anti-skid. Kubaluleke kakhulu futhi kulula ukuhlanza, kulula ukufaka futhi iqine ekusebenziseni.
Nehele Mesh imikhiqizo aklanywa futhi akhiwe ukuze ezakhiwe ahlukahlukene zezimboni kanye yombango komgwaqo edolobheni, izingadi, egcekeni, esikhumulweni sezindiza, ujantshi kanye zobunjiniyela ezimbonini, futhi banika abantu okulandelayo izici:
* sinesimo sengqondo Tebuciko: imigqa Simple nesiliva ukubukeka umhlangano lo mkhuba yesimanje.
* The best amanzi: Ukuvuza endaweni amaphesenti 83,3, ezingaphezu kuka kabili imikhiqizo cast iron ka.
* Hot-idiphu lashukumisa ukwelashwa: Good impahla nokugqwala-ubufakazi, ukunakekelwa esikhundleni.
* Anti-theft design: Ikhava kanye Uhlaka kuyinto ezikanye lomnyango umnikelo zokuphepha, ukuphepha kanye lula evulekile.
* Savings ukutshalwa: Ukubolekisa span. Ngaphansi walahleka komthwalo osindayo kuqhathaniswa imikhiqizo cast iron. Izindleko kungenziwa okulondoloziwe ingozi eyebiwe noma kwasani eyodwa uma cast iron kuyinto ukusetshenziswa.
* Amandla High: Amandla kanye ukuqina iphakeme kakhulu kunanoma cast iron. Kungasetshenziswa for ezikhumulweni, sezindiza nezinye ezinkulu-span futhi isimo ukulayisha esindayo.
Olandelayo: Netting plastic